March 13th, 2014 Wararkii Ugu danbeeyay ee Degmada Buulo Burde iyo hawlgalki ay gelinkii dambe ee maanta kula wareegayn Ciidamada Dowladda
Ciidanka AMISOM ee Ethiopia iyo kuwa Dowlada Soomaaliya ee Gobolka Hiiraan ee oo kaabaya , ayaa Maanta Gelinkii Danbe waxay la wareegeen degmada Buula-Burte ee gobolka Hiiraan. Kadib Lawareega ay
March 13th, 2014 muqdisho waxaa sanadahi danbe Camiray Dayuus Baro Qurba Joog
waxaa sanadahi danbe magaalada muqdisho ku soo badanayey qurba joogta kuwaasi oo u muuqda in aay isoo dalxiis tagayaan dalkii hooyo oo in mudo ah aay ka maqnaayeen. ugu horeyn
March 13th, 2014 Fasirid Riyo wiil Ku Riyooday asaga oo Hilib -Xun Cunaya—————————–
wiil dhalinyaro ah ayaa ku riyooday asaga oo cunaaayo Hilib doorsoomay ama soo uraayo waliba asaga oo ka tagaayo Hilib Udugiisa soo baxaayo. ama aad usoo carfaayo waliba Hiilbka doorsoomay
March 13th, 2014 Magaalada Muqdisho Dhufeysyo Badanaa Yaabka Yaabkiis !!!!
Markii uu waagu baryey waxaan u soo dhaqaaqey Goobteydii Shaqada waxaan arkey Dad meel ku Xoosan oo isugu jiro Odoyaal, Haween, Dhalinyaro iyo Caruur kuwaas oo Laba laba u Faqaya,
March 13th, 2014 Qatarta Dagaalo la sheegay in ay kusoo wajahanyihiin Muqdisho oo laga digay(Daawo Sawirada)
Guddoomiyaha Isbaheysiga nabada Soomaaliyed C/llaahi Shiikh Xasan oo maanta shir jaraaid qeybaha warbaahinta ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka digay dagaalo ku soo fool leh magaalada Muqdisho oo sababi kara
March 13th, 2014 Daawo Sawiro uu qaaday Dayax Gacmeed oo soo bandhigay wax u eg Bur burka Diyaarada Malaysia Airlines
Dowlada Shiinaha ayaa soo bandhigtay Sawiro uu qaaday Dayax Gacmeed dalkaasi laga leeyahay, kaa oo soo bandhigay Sawiro u eg Bur burka Diyaarada Malaysia Airlines oo la la’yahay tan iyo
March 13th, 2014 Ciidamada Huwanta oo ku wajahan mid kamid ah Degmooyinka ugu muhiimsan ee gacanta ku hayaan Al-Shabaab
March 12th, 2014 Daawo Muuqaalka “Wasiir Kamid Ah Wasiirada Dalka Soomaliya oo ka yaabsaday Dadweynaha Magaalada Muqdisho!!
Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Mustaf Dhuxulow ayaa ka yaabsaday dadka Soomaalida iyo beesha Caalamka markii uu sameeayay talaabo aad loo amaanay oo lagu dhiirigelinayay nabadgalyada Magaalada Muqdisho. Wasiirka ayaa kubad ku
March 12th, 2014 Maxaa Lagu Xasuusta Ragii Xilalka soo qabtay Xiligi Shariifka Ilaa Hada
Halkaan waxaan idiin kuugu soo gudbin doono Madaxdi ugu danbeeyay ee dalka xiliga uu madaxweynaha ka ahaa Shariif Sheikh Axmed Iyo waliba wax qabadkoodi war baxin kooban. Sheikh Shariif Sheikh
March 12th, 2014 Halkan ka Aqriso” Magacyada Gudoomiye kuxigeenada Maamulka Gobolka Banaadir oo la Magacaabay
Madaxweynaha Somalia Xasan Shiikh Maxamuud ayaa soo saaray wareegto xilalka looga qaaday gudoomiye ku-xigeenadii hore ee gobolka Banaadir. Wareegtada ayaa sidoo kale lagu magacaabay masuuliyiinta cusub ee ku-xigeenada ka noqonaya
Page 20 of 44« First«...1819202122...40...»Last »